Umhla My Pet » 5 Tips ukwenza Great oluselayinini kuqala Dating Ingcamango
ukubuyekezwa: Jan. 21 2021 | 3 min ukufunda
Xa abantu bethetha koko, ngoko nangoko ukuba ubuso-ngobuso zoqhagamshelwano. nokuba, amaxesha etshintsha, kunye koko lubaluleke kakhulu kunye zoqhagamshelwano online ... ingakumbi xa kuziwa kwi ukuthandana online. kwaye, imithetho ubuso-ngobuso Imbonakalo kwahluka online ukuthandana Imbonakalo.
Apho ngeBhayi- First Bala: IProfayile Yakho and Email yakho
Ukuba ukhetha ukuthandana online phezu neendlela zamandulo ukuthandana, into yokuqala kufuneka aqonde kulapho ngeembono zakho kuqala uza kumba. kwaye, ngeembono zakho kuqala uza kufunyanwa kwiprofayile yakho zombini kwaye email.
Xa kuziwa iProfayile Yakho:
Ukuba ngaba sele awazi, iprofayile yakho zinokubazezi vumelanayo kwaye sizithembile - nto leyo ebonisa ukuba uziva ulilolo okanye lithemba (enkulu turn-off kwabasetyhini). Kananjalo ufuna ukuqinisekisa ukuba ihlala yangoku, ngoko kuyihlaziya qho xa ufuna ukuba (okanye xa izinto zitshintshile ebomini bakho). Qiniseka ukuba elichazayo malunga iintlobo zezinto ungathanda ukwenza ntoni ngaphandle ulwazi kakhulu yasekunene ngephini. khumbula, ufuna ukuba babe nomdla xa email emva naphambili.
Xa kuziwa Email lwakho:
ngoku, Ukuba uceba kwi imeyile i "umhla" ithemba, ufuna ukwazi ukuba ubhalwa njani kumbulali lokuqala email bacinge. Loo email lokuqala ukuthumela kufuneka shushu, baze; ukhangela ukubonisa kumamkeli ukuba sele umdla yaye kufuneka akwazi. Ngoko ke, kufuneka ukuba email uqala kubandakanya oko?
1 - Your Email Ukubulisa
Xa ufumana iprofayile umntu na kwaye isigqibo ofuna email, ufuna ukwazi ukuba kuthi ukuba babe nesimilo omkhulu kuqala. Kufuneka uqalise email off nezi zilandelayo, "Bhota okanye ngorhatya okanye Hello (lomsebenzisi)". Qiniseka ukuba lomsebenzisi loo mntu elipelwe ngokuchanekileyo - bhala phantsi ukuba kufuneka. Olu hlobo lokuvula idibana ezifudumeleyo kunye nokumenywa.
2 - Lonxibelelwano Brief
Xa kuziwa kwi ubhala sokuqala email bacinge, nantsi amaqithiqithi kufuneka sikhumbule: imihlathi ngaphantsi ezimbini nto ngaphezulu imihlathi emithathu yaye akukho nto. Nantoni mfutshane okanye efanayo ziya uzifumane iimpendulo, kwaye nantoni elide ithetha ukuba uzama ubonakale njengetyhudisayo.
3 - Fumana Ground Common
Xa khangela ngaphaya yabucala zabo, Ngokungathandabuzekiyo zazinento eqhelekileyo kangaka ndizakuyichaphazela loo nto kwi-imeyile. Ukuba into engaqhelekanga ukuba zombini sabelo eqhelekileyo, ukubaxelela ngalo. Nangona abaninzi abantu baya khangela phandle iprofayile yakho emva kokuba ufumane i-imeyile kuwe (kwaye ewe, iprofayile yakho, kufuneka ukhankanye azithandayo zakho ozithandayo), kufuneka kusoloko bala kule.
4 - Iinkcukacha Khankanya Profile-ngqo
Xa ngoku ukhe bugqithile iprofayile labo ngenyameko, ngoko xa uqala ukubhala email yakho, khankanya into ethile ngayo. Cinga uthetha kwindawo ubukhe bona okanye imovie ke sibonile, etc. kwaye vumelanayo malunga nesihloko. Kubalulekile ukuba ubonakale njengomntu HIV ukuba ufuna ukuze baphendule umva.
5 - Cela omnye (Nje enye) Umbuzo ngqo
Ngokuba kuhle ukuba cela nje omnye umbuzo ngqo ukuze ufumane impendulo umva. Too imibuzo emininzi ubonakala ngokuba Nosy. Qiniseka umbuzo yinto ke abanangxaki ngokuphendula.
ukuba kubalulekile ukukhumbula ukuba ukwenza uluvo lokuqala, zombini iprofayile yakho kwaye email kufuneka khangela imema - ukuya phezu kwabo bobabini kunye ngekama enamazinyo, ukukhangela upelo negrama iimpazamo. Nyaniseka kuzo zombini, kwaye xa ubhala ukuba email lokuqala, ukunamathela ulwazi ngokubanzi - nina, iminyaka yakho, Ukuba ubuzifihla ukuba atshate, kuba abantwana, etc.
Imbonakalo azikho nje ubuso-ngobuso zoqhagamshelwano kwakhona; akuhambi zikwasetyenziswa online. Kunye ucebe, uyakwazi ukwenza uluvo lokuqala ukuba ufumana iimpendulo ukhangela.